Korea Avaratra: Resaka Manodidina Ny Fandefasana Balafomanga Tsy Nahomby · Global Voices teny Malagasy
Korea Avaratra: Resaka Manodidina Ny Fandefasana Balafomanga Tsy Nahomby	Voadika ny 19 Avrily 2012 6:31 GMT
Zarao: Nandefa balafomanga i Korea Avaratra tamin'ny 12 aprily 2012 na dia teo aza ny fampitandremana iraisam-pirenena sy ny fandrahonana fanokana-monina mafimafy kokoa. Indrisy anefa, fa nipoaka tanteraka ny balafomanga taoriana indrindra ny nandefasana azy ka nilatsaka tao anaty ranomasina ny potiny. Niteraka fanehoan-kevitra marobe teo anivon'ny aterineto Koreana-tatsimo izany voina izany.
Tsikera momba ny fandaniam-bola goavambe tamin'ny nandefasana ny balafomanga no fanehoan-kevitra hita voalohany mikasika ny vaovao fandefasana balafomanga, volabe izay tokony hanampiana ireo Koreana Avaratra an-tapitrasany matin'ny hanoanana. Eto ny fanehoan-kevitra avy amin'ib Kim Sun-jun (amin'ny teny koreana) :
Mitovy amin'ny vola laniana isan-taona amin'ny famatsiana varimbazaha ny vola nolaniana tamin'ny fandefasana balafomanga (izay tokony hamelomana ireo Koerana-tavaratra) [Fanamarihana: fambolena fanampiny fotsiny tao Korea Avaratra taloha ny varimbazaha saingy nanjary fambolena foto-pivelomana izany ankehitriny noho ny tsy fisian'ny vary nandritra ny taompolo]
Miaramila Koreana-tavaratra mitazana any atsimo nandritra ny fanazaran-tenan'izy ireo tao amin'ny faritra arovana mifanila, faritra tsy misy miaramila. Avy ao amin'ny Wikipedia ny sary.
Nanoratra sioka enina nampitain'ireo mpisiokantserasera maro imbetsaka avy eo i Yoon Jae-won (@yjw23_kseri), mpandalina Koreana-tavaratra ao amin'ny Sampam-pikarohana ara-toekarena Kim Kwang Su. Nanontany ny hevitry ny olona amin'ny fahombiazan'ny sazy iraisampirenena i Yoon rehefa avy nanameloka ny fandefasana balafomanga nataon'i Korea Avaratra, sokajiana ho «fihetsika mahavoasazy» sy mety hamotika ny afifampiresahan'ny eni-tonta ( Korea Atsimo sy Korea Avaratra, Etazonia, Shina, Rosia ary Japana) izay nandroso tsimoramora:
Kanefa, tokony hahafantatra tsara ny zava-misy mahakasika an'i Korea Avaratra isika. Ara-pitsipika, mety ny fiampangana azy amin'ny alalan'ny Filan-kevi-Piarovan'ny Firenena Mikambana saingy mety hiteraka voka-dratsy amin'ny hoavy ny fampiasana izany fanasaziana mahery vaika sy mandeha irery.
Yoon nanazava bebe kokoa :
Hampisaraka an'i Korea Avaratra amin'ny fiarahamonina iraisampirenena ny fampiharana ny sazy iraisampirenena ho toy ny [paikady diplaomatika] tokana. Hanamafy hatrany ny fanararaotam-pahefana ataon'i Kim Jong-un [filoham-pirenena ankehitriny] amin'ny famoriany ny vahoaka ho eo ambany fahefany samirery. Tokony mahavita mamaha izany toe-draharaha izany ny fitondran'i Lee Myung-bak [filoham-pirenena ankehitriny ao Korea Atsimo] ary tokony hiezaka tsy hanoka-monina lavitra an'i Korea Avaratra ihany koa mba hitondra azy [Korea Avaratra] any amin'ny fivoarana sy ny fahalalahana ara-barotra.
Mpiady hevitra ao amin'ny forum Daum Agora, stkt, nandà hampiasa ny teny hoe “nandamòka” raha mitantara ny fandefasana balafomanga nataon'i Koera avaratra satria tsy misy ny tsifahombiazana (faharesena) amin'ny traikefa siantifika ary indrindra amin'ny fandaharan'asam-pandrosoana an-habakabaka:
Tsy mety amin'ny fandefasana balafomanga ny fomba fiteny amin'ny fanandramana fanao andavanandro ny teny hoe “tsifahombiazana” . Tsy mitovy amin'ny fanandramana fanao amin'ny fitaovam-piadiana ny fandefasana balafomanga iray satria avy amin'izany ihany no ahafahana manangona tahirin-kevitra momba ny fandefasana balafomanga. Ny zava-dehibe eto dia ny fahafantarana raha nahomby tamin'ny fanangonam-pahalalana nandritra ny fanandramana ry zareo sy nahazo lesona tamin'izany fa TSY ny fahafantarana raha nandeha tokoa ny balafomanga.
Mpiserasera Daum Agora, Ceasurs21, namosaka hevitra mahaliana:
Na dia tamim-pifaliana aza no nandrenesako ny vaovao momba ny fandefasana balafomanga “nandamoka” tao Korea Avaratra, tao anatin'izany, niahiahy ny ain'ireo Koreana Avaratra tadindonin-doza izay nandray anjara tamin'ny fandefasana ny balafomanga aho. Mikasika ny manampahaizana tompon-kevitra tamin'ny nandefasana balafomanga kosa, mety afaka niaro ny ainy izy ireo, rehefa avy notreronin'ny fitondrana saingy mampahonena ahy koa ny amin'ireo manam-pahaizana tsotra hafa izay nalefa tany am-ponja noho ny tsifahombiazany […] Koreana Atsimo sasany [mpamatsy vola] ihany koa no hizaka ny vokadratsin'ny fandefasana balafomanga tsy nahomby. Raha niely be ny vaovao momba ny fandefasana balafomanga tao anatin'izay andro vitsy izay, nahitana fiakaram-bidy goavana tao amin'ny indostrian'ny fiarovana sy ny filaminana.
Nitaraina ny mpisera Daum Agora 이건좀아니다 fa rehefa tsy niova tamin'ny fandrahonana mahazatra nandritra ny taompolo maro i Korea Avaratra, ka nanazavany ny paikady politika sahisahy ratsy fanaony, dia anjaran'ny governemanta ao Korea Atsimo sisa no manomana paikady mahomby hifehezana ity toe-draharaha ratsy sy manahirana ity.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraLee Yoo Eun
Nandika (es) i Leila M
Tantaran'ny Azia Atsinanana farany 3 andro izayJapanaNiteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila
3 andro izayShinaSiansa-Famisavisana Shinoa Nandrombaka ny Loka Hugo Tantara Foronona Tsara Indrindra
3 andro izayMaleziaNahazo Olona 100.000 Ny Fihaonambe Bersih Maharitra 34 Ora Tao Malayzia Izay Manohitra Ny Kolikolin'ny Governemanta
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Français, Filipino, 繁體中文, 简体中文, македонски, 日本語, English
Azia AtsinananaKorea AtsimoKorea Avaratra
Ady & FifandiranaMediam-bahoakaPolitikaTeknolojiaVaovao Mafana